रोजारियो भेम्पायर सीजन - - यो कहिले हुन्छ? - पालना दृश्य
by Dima 14th डिसेम्बर 2020 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड रोजारियो भेम्पायर सीजन on मा - यो कहिले हुन्छ?
रोजारियो भेम्पायर एक पुरानो एनिमेज हो जुन पहिलो जनवरी,, २००3मा प्रसारित भयो र मार्च २ 2008, २०० 27 मा समाप्त भयो। दोस्रो सत्र अक्टोबर २, २०० - - डिसेम्बर २,, २०० from बाट प्रसारित भयो। यो स्स्कुन नामको केटाको बारेमा anime छ जो दुर्घटनामा पर्दछ। गलत स्कूल बस र हाईस्कूलको पहिलो दिनमा गलत स्कूलमा समाप्त हुन्छ। केवल कुरा यो हो, यो कुनै सामान्य विद्यालय होइन, यो शैपशिप गर्ने राक्षसहरूको स्कूल हो जुन मानव रूप लिन्छन्।
अवलोकन - रोजारियो भेम्पायर।
जब टिस्कुन यस स्कूलमा आइपुग्छ उसले अचानक आफू केमा छ भनेर बुझ्छ र उसले सुन्दर मोकालाई भेट्ने बित्तिकै ट्र्याक गर्न खोज्दछ, जुन उहाँसँग उही विद्यालयको नयाँ विद्यार्थी हो। Moaka एक पिशाच हुन र दुई साथीहरु हुन्छ। मोकोआले Tskunes लाई अलि पछि चिन्दैनन्। पहिलो सीजनको मुख्य कथन सबै नयाँ पात्रहरू हो जुन स्स्क्यूनले उनको साथ भेटे र उनको मानव पहिचान नदेखाउने प्रयास गर्दै मोकाको सहयोगमा।
रोजारियो भेम्पायर सीजन।
शो को कल्पना को यस प्रकार मा एक अधिक हास्य चालित पक्ष को पेशकश गर्दछ कि anime को एक धेरै वरिपरि केन्द्रित छन् र यो मेरो खुशी को लागी म पहिले देखेको animes को एक हुन रमाईलो बनायो। तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ यो रोमान्स एनिमे हो, तर धेरै दर्शकहरूले रोसाईओ भम्पायरमा केही दृश्यहरूको कारण यसलाई हेरम वा फ्यान सेवा-प्रकार एनिमेस भने। त्यसोभए के त्यहाँ रोजारियो भिम्पायर सीजन be कहिले आउँछ? त्यो हामी यो भ्लगमा छलफल गर्न जाँदैछौं के हो।
मुख्य पात्रहरू - रोजारियो भेम्पायर सीजन।
मैले रोजारियो भेम्पायरमा मुख्य पात्र राम्रै बोरिंग र साधारण पाएँ। मलाई वास्तवमै केहि शर्तमा धेरै दिइएको थिएन वा कसैसँग सहानुभूति देखाउने। ऊ तपाईंको दैनिक हाईस्कूल किशोर हुनु पर्ने थियो र त्यहाँ उसको बारेमा कुनै रोचक कुरा थिएन। ह्यु एक प्रकारको र हल्का मनको तरीकाले कार्य गर्दछ तर पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ जब मोकाको वरिपरि हुन्छ। मलाई लाग्छ अभिनेताले मुख्य पात्रको रूपमा चित्रण गर्दा राम्रो काम गरे। मुख्य पात्र Tskune रोजारियो भेम्पायर सीजन3मा देखा पर्नेछ।
पहिले हामीसँग Tsukune Aono छ जो विद्यालय र नयाँ विद्यार्थी जो उनी र मोका दुवै उपस्थित छन्। मोकाले उनलाई मित्र बनाउँदछ र तत्कालै दुईमा प्रेम हुन्छ। यहींबाट सम्पूर्ण कथा सुरू हुन्छ।
Tskune अग्लो छ र जापानी Highscool विद्यार्थीको लागि औसत निर्माण। उहाँ व्यावहारिक रूपमा आकर्षक हुनुहुन्न जुन यो मानव दृश्य हो जुन सबैमा चाखलाग्दो हुन्छ।
अर्को मोका अकाशियाह हुन् जो वास्तवमै मुख्य पात्र होइन तर स्स्कुनको प्रेम रुचि र बुद्धिमानको रूपमा कार्य गर्दछ। मोका एक पिशाच हो र स्स्कुन एक राक्षस भएको नाटक गर्ने मानव हो त्यसैले मोकाले स्स्कुनको गन्ध मन पराउँछन् किनकि यो पाठ्यक्रमको मानव नै हो।
मोकाको गुलाबी कपाल छ र धेरै आकर्षक छ। उनी दयालु र असल हृदय छिन। उनको पनि दुई पक्ष छन्। उनको मीठो मानवीय पक्ष र उनको सुरक्षाको चिसो पिशाच तर्फ, पछिल्लोलाई चुनौती दिन मिल्दैन।
रोजारियो भम्पायरका उप पात्रहरू निश्चित रूपले अद्वितीय थिए र तिनीहरूको आफ्नै व्यक्तिगत विशेषताहरू थिए जुन श्रृंखलामा अडिग थियो। मलाई तिनीहरू मध्ये धेरैले मन पराए यद्यपि तिनीहरू सबै महिला थिए र मोकाबाट स्स्कुन बिचलित गर्ने गर्थे।
अन्त्य - रोजारियो भेम्पायर सीजन।
त्यसोभए त्यहाँ हेर्नको लागि त्यहाँ रोसारियो भिम्पायर सीजन3हुन हामीले सबैभन्दा पहिले रोजारियो भिम्पायरको अन्त्यतिर हेर्नु पर्छ। रोजारियो भेम्पायरको दोस्रो सत्रको अन्त्य दयालु inc inccclusive थियो। हामीले मोकाका बुबा र कुरुमुकी आमा समेत धेरै पात्रहरू सँगै आएका देख्यौं। अन्त्यमा मोकाले स्स्कुनलाई उनको बुबाले स्कूल ध्वस्त पार्न र मद्दत गर्नुपर्‍यो र स्स्कुनको अन्त्य गर्न सहयोग गर्नुपर्‍यो। अन्तले रोजारियो भेम्पायर सीजन in मा ठूलो भूमिका खेल्नेछ।
हामी वास्तवमै कहिल्यै मोका र ट्स्कुनलाई भेट्न पाएनौं र यसले प्रशंसकहरूलाई निराश र निराश बनायो, यदि तिनीहरूले म read्गा पढेका भए पनि। टिस्कुन र अन्य सबै पात्रहरू स्कूल बसमा घर फर्कन्छन् र कोकोआले उनको बुवाले कुटपिट गरेको कारण कुटपिट गरेका थिए। यो एक राम्रो अपूर्व अन्त हो र एक मलाई निश्चित छ हामी सबैहरू पूरा भएको हेर्न चाहन्छौं, विशेष गरी मोका र ट्स्कुनको सम्बन्धमा।
अर्को मौसम हुनेछ? - रोजारियो भेम्पायर सीजन।
खैर, anime मूलतः जनवरी,, २००3बाट चल्यो - मार्च २,, २०० Fun फनिमेसनमा। दोस्रो सत्र अक्टोबर २, २०० 2008 - डिसेम्बर २,, २०० 27 सम्म चलेको थियो। त्यसोभए तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि रोजारियो भेम्पायरको एनिमेज जारी भएको धेरै समय भइसक्यो, तर यो सबै समयसम्म खराब कुरा होइन। मa्गाको रन नोभेम्बर,, २००ing मा शुरू भएको थियो र अप्रिल १,, २०१ 2008 मा समाप्त भयो। त्यसैले यो मa्गा बन्द भए2बर्ष मात्र भयो। मa्गा अब समाप्त भयो र २० खण्डहरू लेखिएका छन्। त्यसोभए तपाईले सुरक्षित भन्न सक्नुहुन्छ कि म the्गा सकियो।
एनिम अनुकूलन (तपाईंले अनुमान गरेको हुन सक्छ) सबै २० खण्डहरू समेट्दैन। त्यसोभए यसको मतलब त्यहाँ अझै अझै धेरै सामग्रीहरू अनुकूलित गरिनु पर्दछ र त्यसकारण रोजारियो भेम्पायर सीजन 20. मा बनाइन्छ। यो अन्तिम म mang्गालाई years बर्ष पहिले प्रकाशित गरिएको थियो भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्दैछ। जहाँसम्म हामीले भनेको छ र भविष्यवाणी गरिसकेका छौं एनीम उद्योग अगाडि अप्रत्याशित छ र पूर्ण धातु पैनिक जस्ता एनिमेसको साथ एक पटकमा वर्षौंसम्म अन्तराल चलिरहेको छ र फर्केर आउँदैछ, यो सम्भव छ भन्नेमा कुनै अचम्म छैन। त्यसकारण हामी सोच्दछौं कि रोसाइओ भिम्पायरको नयाँ सिजनको लागि यो पूर्ण रूपमा सम्भव छ।
यो कहिले प्रसारित हुन्छ? - रोजारियो भेम्पायर सीजन।
हामीले माथि भनेका सबै कुरा भन्न सक्नेछौं कि रोजारियो भेम्पायरको नयाँ सत्र २०२२ र २०२ between को बीचमा कुनै पनि समय आउँनेछ। हामी २०२ at लाई रेखा खान्छौं। यो किनभने उत्पादन कम्पनीले यसमा बोल्ने विचार गर्न असम्भव छ। यो बिन्दु पछि। अहिलेको रूपमा यद्यपि हामीले पर्खनु र हेर्नु पर्छ। जति सक्दो चाँडो हामीले रोसारियो भिम्पायर सीजन saw देख्यौं मेरो विचारमा राम्रो।
यद्यपि यो सबै हामी वास्तवमै अहिलेको लागि भन्न सक्छौं। मैले आफैं दुबै watchedतुहरू हेरेको छु र वास्तवमा यो मैले पहिल्यै देखेको पहिलो एनिमेसमध्ये एक हो। मलाई यो तेस्रो सीजनको लागि फर्कन मनपर्छ ताकि म यसलाई फेरि भेट्न सकूँ। त्यसो गरे राम्रो हुन्थ्यो। अहिले सम्म हामी केवल भन्न सक्दछौं कि मूल वा जग्गा सामग्री उत्पादन गरिएको छ त्यसैले त्यहाँ अर्को स्टुडियो वा उही स्टुडियो रोक्ने केही छैन वास्तवमा रोजारियो भेम्पायरको तेस्रो सीजन उत्पादन र अनुदान।
रोजारियो भ्याम्पायर पहिलो एनिमेजहरू मध्ये एक थियो जुन मैले कहिल्यै देखेको थिएँ र मैले यो लामो समयमा चाहेको पनि थिइन। यो हास्यास्पद रमाईलो थियो र सबै मैले त्यस समयमा फाराम एनिमको आशा गरिरहेको थिए। म यो अर्को गर्न को लागी प्रेम गर्दछु र आशा छ कि अन्तिम फिर्ती छैन। सक्कली सामग्री उत्पादन गरिएको छ त्यसैले त्यहाँ अर्को स्टुडियोले अन्त्य स्टुडियोबाट बन्द गरीरहेको केही छैन जहाँ अन्य स्टुडियोले सीजन २ मा छोडेको छ। आशा छ कि हामी रोजारियो भेम्पायर सीजन २ देख्नेछौं।
टैग: animerosariovamire rosario + vampireseason3 rosariovampire rosariovampireanim rosariovampirenewseason rosariovampireseason3 rosariovampireseason3? rosariovampireseason3blog season3ofrosariovampirefullarticle सिजन3rosariovampire बियरोसारियोभम्पायरसिजन ३ त्यहाँ सँधै बियरोसरीओम्पायरसिजन ३
अघिल्लो प्रविष्टि पूर्ण धातु आतंक सीजन - - यो हुनेछ?
अर्को प्रविष्टि के कागुया सामथ्य हेरिरहेको छ?